बाबुरामले मुख खोलेपछि तरंग: बूढीगण्डकीमा ओली, प्रचण्ड र देउवा फस्छन् ? « Postpati – News For All
बाबुरामले मुख खोलेपछि तरंग: बूढीगण्डकीमा ओली, प्रचण्ड र देउवा फस्छन् ?
पत्रपत्रिकाबाट पढ्न लाग्ने समय : ८ मिनेट
असोज २८, काठमाडौँ । २०६९ मंसि नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा प्रवेश गरेको यो आयोजनाका बारेमा विवाद नभएका वर्ष छैनन् । निर्माण मोडालिटीदेखि आयोजना ठेक्का सम्झौताका निर्णय गर्ने सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्व विवादमा पर्दै आएका छन् ।